Inja ye-Greyhound Breed FAQ nolwazi - Izinhlobo
Sekuyizinkulungwane zeminyaka, amaGreyhounds akhuliselwe ukuzingela ngokubalekela inyamazane yawo. Babengahloselwe ukuba ngabazingeli bodwa, kepha ukuthi basebenze nezinye izinja. Ukushintshela ekuzingeleni uye emijahweni kugcine lesi sici sobuntu babo siphila kakhulu.
Uhlobo lwenja olushesha kakhulu, amaGreyhounds angafinyelela ngejubane eliphezulu lamamayela angama-45 ngehora futhi angaba ngaphezu kwamamayela angama-30 ngehora amabanga afinyelela kumayela elilodwa. Ukuzalanisa ngokukhetha kunikeze iGreyhound umzimba womsubathi ngomusa womdansi.
Ngasikhathi sinye, isidingo sokulindela izindlela ezibalekayo zokudla kwabo sinikeze iGreyhound izinga eliphezulu lokukhalipha.
IGreyhound inentamo nekhanda elide, enokuma okungabonakali, noma ibhuloho ekhaleni lakhe. Izindlebe zincane futhi zivame ukugoqeka emuva entanyeni. Izindlebe zingama zime noma zime ngokuphelele lapho iGreyhound ilalelisisile. Lokhu kubizwa ngokuthi “indlebe evukile.”
Umhlane mude futhi unemisipha nge-arch ngaphezulu okhalweni. Isifuba esijulile nesinqe esincanyana kunika iGreyhound isithunzi sayo esihlukile. Imilenze mide futhi inamandla. Izinyawo zincane futhi zihlangene, zinezinzwane ezifakwe kahle. Umsila mude futhi ugobile.
Ijazi leGreyhound lifushane futhi libushelelezi futhi liwumphumela wokuwela iGreyhounds neBulldogs maphakathi nawo-1700s. AmaGreyhounds eza ngemibala ehlukahlukene engapheli, kufaka phakathi okumhlophe, i-fawn (tan), ukhilimu, obomvu (ukugqwala), omnyama, oluhlaza okwesibhakabhaka (okumpunga), imibala eminingi ye-brindle, kanye nezimagqabhagqabha zale mibala emhlophe.
Cishe awekho amafutha omzimba. Ngokuvamile, amaGreyhounds ahlanzekile kakhulu futhi awadingi ukuzilungisa okuningi.
Umbukiso iGreyhound uqobo ume phakathi kwamasentimitha angama-26 kuya kwangama-30 ehlombe futhi unesisindo esingamakhilogremu angama-60 kuye kwangama-85. Ama-Bitches aphakathi kwamakhilogremu ayi-10 kuye kwangama-15 ngaphansi kwezinja. Isikhathi sokuphila esimaphakathi siyiminyaka eyishumi nambili kuya kweziyishumi nane.
Landelela ama-Greyhounds ngokuvamile aphakathi kwamasentimitha angama-25 kuya kwangu-29 namakhilogremu angama-50 kuya kwangama-80. Izinga le-AKC licacisa ama-65-70lbs kwabesilisa, ama-60-65 abesifazane njengalungile.
IGreyhound iyisilwane esithulile nesithobayo uma ingagijimi. Ngenkathi bekwazi ukuqhela lapho kukhona abantu ongabazi, imvamisa bavame ukuba nobungane kubantu abaningi. Bathanda kakhulu labo ababaziyo nabathembayo.
IGreyhound yamukelwa yiwo wonke amakilabhu amakhulu ezindlwana emhlabeni wonke, kanye namaqembu ahlukahlukene kazwelonke emijaho afana neNational Greyhound Association (NGA) kanye neAmerican Greyhound Council.
AmaGreyhounds angenye yezinhlobo ezindala kakhulu zezinja futhi avela kubuciko nasezincwadini kuwo wonke umlando. EGibhithe lasendulo, amaGreyhounds ayemiswa futhi angcwatshwe kanye nabanikazi bawo, futhi amathuna ayevame ukuhlotshiswa ngezibalo zeGreyhound.
I-hieroglyph yenja ecishe ifane nezinhlobo zanamuhla zeGreyhound, iSaluki, neSloughi ingatholakala emibhalweni yaseGibhithe lasendulo. U-Alexander Omkhulu wayeneGreyhound egama linguPeritas.
IGreyhound kukhulunywa ngayo eTestamenteni eliDala (Izaga 30: 29-31), uHomer ( Odyssey , lapho okuwukuphela kwakhe owabona u-Odysseus lapho ebuya kwakuyiGreyhound yakhe, i-Argus), uChaucer ( Izinganekwane ZaseCanterbury ), noShakespeare ( UHenry V futhi Merry Wives of Windsor ). Onkulunkulu nonkulunkulukazi bamaGrikhi nabamaRoma babevame ukuvezwa ngeGreyhounds.
NjengoClarke, ku IGreyhound uthi:
Kepha, njengoba iGreyhound isendulo, bekungaba ukwelula iqiniso ukusho ukuthi ama-hounds ase-Arabia akhonjiswe emathuneni okhokho baseGibhithe lasendulo ayefana namaGreyhound esiwaziyo namuhla.
Ngokuvumelana kwabo, ngomusa wabo nangejubane labo, ezinkondlweni zokunyakaza kwabo, yebo, kodwa hhayi ngesitayela sebhatshi abebegqoke! Eqinisweni, kunesizathu sokukholelwa ukuthi i-Arabian Greyhound kungenzeka ukuthi yayifana neSaluki - kepha kubo bonke, iseyinja yomndeni wakwaGreyhound.
Kunezincazelo eziningi ezehlukene ngemvelaphi yegama elithi Greyhound. Omunye umbhali uphakamisa ukuthi isitoko sokuqala saseGreyhound sasinombala ompunga kakhulu. Omunye uthi leli gama lisuselwa ku-Old English elithi “grei,” elisho “inja,” nelithi “hundr,” elisho “umzingeli.”
Enye incazelo ukuthi lisuselwa kwelithi “gre” noma “gradus,” okusho “isikhundla sokuqala ezinjeni.” Ekugcineni, kuphakanyisiwe ukuthi leli gama lisuselwa ku-Greekhound selokhu i-hound yafika eNgilandi ngamaGrikhi.
Ama-Greyhounds kudala ahlotshaniswa nobukhosi. Eqinisweni, kusukela ngekhulu le-11 kuya kwele-14, umthetho wamaNgisi wawunquma ukuthi akekho “umuntu ononya” owayevunyelwe ukugcina iGreyhound. Inhlawulo yokwephula lomtsetfo kwaba kufa!
AmaGreyhounds anesimo esimnene kakhulu nesokuthula. Bayizinja eziqonde kakhulu ukupakisha futhi ngokushesha bazokwamukela amakhosi angabantu “epakethe” labo.
Ukuvumela ama-Greyhound ahlukahlukene ukuzingela nokujaha ndawonye, ​​ulaka olubhekiswe kwezinye izinja nabantu selucishe lwasuswa kulolu hlobo.
Abaningi bayayigcina idrayivu yezisulu eqinile (okuyingxenye yomjaho wabo) futhi kwesinye isikhathi ayizifanele izindlu ezinezinye izilwane ezifuywayo ezinjengamakati noma onogwaja.
Ukuzwela kwabo nobuhlakani babo kubenza babe abafundi abasheshayo nabaqokelwe kahle ukuqeqeshwa ngokulalela.
Ama-greyhound avame ukubekezelela izingane, ikakhulukazi uma zikhuliswe nazo. Ukungabi nolaka, iGreyhound ngokuvamile izosuka enganeni ekhathazayo, kunokubhonga noma ukuqhuma.
Kodwa-ke, ngisho neGreyhound emnene inemikhawulo yayo, futhi akufanele ihlushwe ngokuqhubekayo.
Yize ama-Greyhounds ewuhlobo lwenja olushesha kakhulu, afinyelela ijubane lawo elimangazayo ku-sprint eyodwa futhi akakwazi ukubekezela okuningi. IGreyhound iyeneliseka ukuba “yizambane elisofa” futhi ichitha usuku lonke ilele.
Njengoba bengenakho ukukhuthazela okuningi, iGreyhound empeleni idinga isikhathi esincane sokuzivocavoca kunezinja eziningi.
Ama-greyhounds yi-sighthound ebonakalayo, iqembu lama-hounds aphishekela inyamazane yawo ngokubona kunephunga. Njengawo wonke ama-sightsounds, ama-Greyhounds anesimo sokujaha esithuthuke kakhulu. Ngaphandle kwalokhu, kungenzeka ukuthi amaGreyhounds ahlalisane ngokuthula nezinye izilwane ezifuywayo, kufaka phakathi amakati, izinja, kanye nonogwaja.
Ukuhlala ndawonye kuzoba lula uma ezinye izilwane ezifuywayo zingabaleki. Ngisho nangemva kokuba uqeqeshe iGreyhound ukuthi ingajahi ikati lomndeni elisendlini, lokhu akusho ukuthi ngeke lijahe ikati likamakhelwane, noma ngisho ikati lomndeni ngaphandle.
Ingabe ama-Greyhound achitha kakhulu?
Kubonakala kwehluka kakhulu enjeni kuya enjeni. Abanye bazokhipha inani elingabazeka, abanye bangakhiphi nakancane. Ukuthi “kuyancomeka” kusho ukuthi uma usebenzisa ikhekhe lekhari, ungathola izinwele ezikhululekile enjeni.
Kukhona ukucabanga okuthile (nobufakazi obungaziwa) ukuthi amaGreyhound anemibala ekhanyayo achitha okungaphezu kwalokho amnyama akwenzayo! Kodwa-ke, khumbula ukuthi ngisho okuthiwa 'ukuchitha kakhulu' iGreyhound kungakhipha okungaphansi kokushoyo, iDalmatian noma i-German Shepherd Dog.
Ngizwile ukuthi azilungile ngezingane. Ingabe lokhu kuyiqiniso?
Izincwadi eziningi zokuchazwa kohlobo zizobala iGreyhound njenge 'highstrung' kakhulu ukubekezelela izingane. Lokhu kungamanga. Iningi lamaGreyhounds linesimo sokuzola, futhi iningi lawo lihle ngezingane, ikakhulukazi uma zikhuliswa ngabantwana abanemikhuba emihle.
Ngokuvamile, noma iyiphi inja, yanoma yiluphi uhlobo, engakhuliswanga phakathi kwezingane noma enemvelaphi engaziwa, kufanele ibhekwe ngokucophelela. Kunoma ikuphi, konke ukuxhumana phakathi kwezinja nezingane, noma ngabe kuthembeke kangakanani, kufanele kubhekwe ngumuntu omdala.
Azidingi ukuzivocavoca okuningi?
Badinga ukuzivocavoca umzimba okuncane kunokucabanga kwakho. Ama-Greyhounds ngokuyinhloko angohlobo lokuphrinta, kunokuba lukhuthazele. Bajabule ngama-run amahle amaningi ngesonto - futhi bazolala kusofa wakho sonke isikhathi!
Uyini umehluko phakathi kwethrekhi (NGA) ne-show (AKC) Greyhounds?
Ngokuvamile, ama-Greyhounds wethrekhi mancane (amafushane futhi asinda kakhulu) kunalawo ombukiso. I-Track Greyhounds inemisipha eningi kakhulu ngemuva futhi izintamo namakhanda azo akwenzi ihaba ngendlela ephansi njengombukiso weGreyhounds '. Lokho ngumehluko womzimba.
Kuvame ukuthi kube nokwehluka kokuziphatha, kepha lokhu kungenxa yokukhuliswa okutholwa yilowo nalowo kunokwehluka kwangempela. Kucatshangwa ukuthi kukhona umehluko othile wezempilo.
Ukulandelela ama-Greyhounds kucatshangwa ukuthi aphile isikhathi eside (ngenxa yesimo esiphezulu se-cardio-vascular); ngakolunye uhlangothi, kucatshangwa ukuthi bathambekele kakhulu kumdlavuza wamathambo, mhlawumbe ngenxa yokuxineka okwengeziwe okuvela emjahweni osindayo. Kodwa-ke, lokhu kungukuqagela kuphela.
Kungani ngibona abantu abaningi bevala umlomo ngamaGreyhounds abo emihlanganweni?
Imizwelo yabo yokujaha isuselwa kudrayivu yezilwane eyakhiwe kahle. Uma uneqembu lama-greyhound ndawonye, ​​ikakhulukazi angajwayelekile, kuyalulekwa ukuwavala umlomo ngomlomo ukuvimbela ukulunywa ngengozi. Ama-greyhound awalona ulaka lwenja, kepha uma ejabule angahle ahlasele abanye.
Ungavumeli izifinyila zikudonsele emqondweni ongewona wokulondeka. Kusamele uqaphe iqembu lamaGreyhounds afinywe ngomlomo ngoba kungenzeka ukubamba izindlebe ngomlomo kanye nokunye.
Qaphela ukuthi ukuvala umlomo kungadingeki ngaso sonke isikhathi; kumane kungukuqapha okunengqondo uma ubhekene neqembu elikhulu lamaGreyhounds.
Ngabe amaGreyhounds angabhukuda?
Abantu abaningi bakholelwa ukuthi ngenxa yesakhiwo sabo namafutha omzimba aphansi ukuthi abakwazi ukubhukuda. Lokhu akulona iqiniso. Amanye amaGreyhounds angabagijimi abahle kakhulu kanti amanye awawona. Gada ukungena kwakho kweGreyhound emanzini uze uqiniseke ukuthi angabhukuda.
Izibindi zeGreyhounds zigaya ubuthi egazini lazo kancane kancane kunezinye izinja ezinobukhulu obufana nobakhe, ngakho-ke kungenzeka ukuthi izingxube eziyingozi zalawa ma-toxin zithuthuke. Futhi, uhlobo lunamaphesenti aphansi kakhulu amafutha omzimba ngokulingana nosayizi wawo.
Kukhona, ngokwesilinganiso, kuphela u-16% wamafutha esisindo somzimba seGreyhound uma kuqhathaniswa namafutha angaba ngu-35% esisindo somzimba wenja elingana nolunye uhlobo.
Ama-greyhounds azwela kakhulu emithini ethile, kufaka phakathi i-anesthesia. Ngaphambi kokuvumela iGreyhound yakho ukuthi ihlinzwe, qiniseka ukuthi udokotela wezilwane uyazi ngezidingo ezikhethekile ze-anesthesia zeGreyhounds.
Ngokuyinhloko, ama-barbituate kufanele agwenywe. Ungesabi ukubuza imibuzo kudokotela wezilwane wakho; akubona bonke abazi ngezidingo ezikhethekile ze-Greyhound anesthesia. URodger I. Barr, i-DVM, ubhale i-athikili ngendlela ephephile ye-anesthesia yama-soundsounds.
Amakhola we-flea, kanye ne-pesticides ehlala isikhathi eside efana ne-Hartz Blockade, nakho kungaba yingozi noma kubulale iGreyhound.
Noma imuphi umkhiqizo okhipha amakhemikhali okubulala amazenze egazini lenja kufanele ugwenywe, njengoba kufanele lawo asetshenziswe njalo ngenyanga kubude bomgogodla wenja noma endaweni engezansi kwentamo yenja (okusho, uRabon, Bayon, ProSpot, Ex- I-Spot, njll.). Imikhiqizo equkethe amaPyrethrins ngokuvamile iphephile ukuthi ingasetshenziswa kumaGreyhounds futhi inikezwe ijazi layo elifushane kakhulu, amakhekhe amakhemikhali ayasebenza kakhulu.
Eminye imikhiqizo ephephile yiRotenone ne-d-Limonene. IRotenone ivame ukuthengiswa ezingxenyeni zokulima izingadi zezitolo zokuphakelayo, kepha ingeyokwemvelo nezinkomba zokwelashwa kwezilwane ezifuywayo zifakiwe 'ekusetshenzisweni okugunyaziwe'.
Izinkampani eziningana zenza ama-d-Limonene dips, sprays, nama-shampoo. I-D-Limonene isuselwa kwizithelo ezisawolintshi futhi iyisibulala-zinambuzane esiphephile ngokwanele. Ngokwengeziwe, i-shampoo yomuntu uPert Plus ibulala amazenze ezinjeni, yize inomphumela omncane noma awunawo nhlobo.
Lather, linda imizuzu embalwa bese ugeza.
Ukunakekelwa futhi kudinga ukwenziwa lapho kukhishwa isisulu seGreyhound, ngoba zizwela ngokweqile kunoma yini enesisekelo se-organophosphate.
Ezinye izinketho eziphephe kakhulu ze-worm Greyhounds: Ukuhlaselwa yi-hookworm noma i-roundworm: pyrantel pamoate. Lesi isithako esisebenzayo kulezi zimpethu ezingezona ezibhalwe odokotela: Khipha, iNemex, iNemex2; naku-wormer kadokotela iStrongid-T. Okwe-tapeworm: amaphilisi e-Droncit.
Imijovo ye-Droncit nayo iyasebenza, kepha ezinye izinja zizithola zibuhlungu kakhulu. Okwe-whipworms, hookworms, kanye ne-tapeworms: iPanacur. Kodwa-ke, khumbula ukuthi ukusabela okungalungile kungenzeka nganoma yisiphi isilwane ngasinye kunoma imuphi umuthi othile.
Njengakwezinye izinhlobo zesifuba esijulile, amaGreyhound athambekele ekuqunjweni, noma ekuhlushweni. IBloat yisifo esisongela impilo lapho isisu siphenduka khona. Kudingeka usizo lwezokwelapha ngokushesha ukugwema ukufa.
Izindlela zokuzivikela zifaka phakathi ukugwema ukuzivocavoca umzimba ngaphambi nje nangehora noma amabili ngemuva kokudla; ukugwema ukungeniswa kwamanzi amaningi ngokushesha ngemuva kokudla i-kibble eyomile.
Izimpawu zifaka isisu esikhubazekile, ukuphalaza okungakhiqizi okuphindaphindayo, ukuhamba ngamandla nokungazinzi. Ingabulala ngokushesha, uhambo olusheshayo lokuya kudokotela wezilwane luhlelekile. Ungase ufise ukuxoxa ngokuqhakaza nodokotela wezilwane wakho, ukusetha kusengaphambili ukuthi yini okufanele uyenze uma kungenzeka inja yakho.
Udokotela wezilwane wakho futhi angaphakamisa ezinye izinto ongazenza ngenkathi ushayela kudokotela wezilwane ukuze uthole ukunakekelwa okuphuthumayo ukuze uthuthukise inja yakho amathuba okusinda.
Ngoba ukugijima kwamaGreyhounds kufuywe ngenqwaba yezinye izinja endaweni yesikhashana, kuzodingeka uqiniseke ukuthi inja yakho ihlolwe izikelemu nezifo ezithwalwa imikhaza njenge-Ehrlichia neBabesia.
I-greyhound esimweni sokujaha kungenzeka ilahlekelwe yimisipha ibeke amanye amafutha uma usuthathe umhlalaphansi. Ngenkathi kungafanele bakhuluphale ngokweqile, zimbalwa izinja ezihlala zisesisindo somjaho, imvamisa zithola cishe amakhilogremu ama-5 lapho zithatha umhlalaphansi. Lokhu kulindeleke.
Akwaziwa ngempela ukuthi amaGreyhounds empeleni athambekele kakhulu kumdlavuza wamathambo kunezinye izinhlobo, kepha kunezindaba ezanele zama-anecdotal zokuqinisekisa ukuthi ubheke iGreyhound yakho yalokhu, ikakhulukazi owayengumjaho wamahhashi. Izimpawu zokuqala zibandakanya ukukhubazeka emlenzeni.
Lokhu kuvamile ezinjeni ezinkulu ikakhulukazi ngaphezulu kokugqama kwamathambo njengezindololwane. Kuvame ukubonakala ezinjeni ezibekwe ku-flooring eqinile. I-hygroma yi-bursa egcwele uketshezi eyakha ukuvikela isikhumba ekucindezelekeni kwe-necrosis kusuka ethanjeni elingaphansi.
Bangathola ukuvuvukala noma ngisho nesilonda. Bavame ukubukeka bethusa kakhulu kunabo; udokotela wezilwane angakweluleka ngenkambo engcono ongayithatha.
Ama-Greyhounds amaningi abonakala enamazinga aphansi ejwayelekile we-thyroid. Izimpawu ze-hypothyroidism zifaka phakathi ukulahleka kwezinwele (ngemuva nasentanyeni, imvamisa ukuhlangana futhi ngokujwayelekile ngokuncipha), ukwenza mnyama noma ukuqina kwesikhumba, nobuthakathaka.
Kwesinye isikhathi ukucasuka kanye / noma ukuvunguza kuyizinkomba. Ukungalashwa, i-hypothyroidism ingaba nemiphumela emibi yesikhathi eside.
Isiqondisi esihle kakhulu sokuqeqeshwa kweGolden Retriever oyoke usidinge
boston terrier french bulldog imidlwane
ubizwa kanjani umxube we-shih tzu poodle
ishio poo ikhule nini ngokugcwele
amagama aluhlaza okwesibhakabhaka abesilisa